Radio Dhangadhi 90.5 MHz | यी हुन् कफीबिनै निद्रा भगाउने दश उपाय
Thursday, July92020, 17:45 | बिहिबार २५, असार २०७७ १७:४५
निद्राबाट जोगिने सबैभन्दा सजिलो उपाय हो कफी। बिहान उठ्नेबित्तिकै ताजा महसुस गर्न सकिएन भने वा दिउँसो झुल्न मन लागिरह्यो भने हामी कफीको सहारा लिन्छौँ। अध्ययनहरुले निश्चित मात्रासम्म कफी स्वस्थकर रहेको पुष्टि गरे पनि धेरै मात्रामा कफी शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ।
दैनिक चार कपभन्दा बढी कफीले अनिद्रा, पेटसम्बन्धी समस्या, आदि निम्त्याउने जोखिम हुन्छ। तर खुसीको कुरा के छ भने कफीबिनै पनि निद्रा भगाउने अनेकौँ उपायहरु छन्।
शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनेबित्तिकै शरीर थकित हुन्छ। अमेरिकन केमिकल सोसाइटीका अनुसार शरीरमा पानीको कमीले कमजोरी महसुस हुने, मुटुको ढुकढुकी बढ्ने तथा बेहोस पनि हुने सम्भावना हुन्छ। पानीले शरीरको हाडजोर्नी मात्र सञ्चालन गर्दैन यसले शरीरको फोहोर पनि निकाल्छ। यसका अलावा शरीरमा अक्सिजन र कार्बोहाइडे«टको सञ्चार राम्ररी गर्छ। हाम्रो शरीरमा ६० प्रतिशत पानी हुन्छ, त्यसमध्ये एकदेखि दुई प्रतिशत मात्र पानी कम हुँदा पनि होस हराउने वा थकाइ लाग्ने हुन्छ।
२. पौष्टिक खाना खानुहोस्
रगतमा चिनीको मात्रा कम भएमा कमजोरी र सुस्त महसुस हुने सम्भावना रहन्छ। राम्ररी सोच्न नसक्ने, थकान महसुस हुनसक्छ। धेरै खाना खाँदा पनि यस्तै महसुस हुन्छ किनभने शरीरले धेरै खाना पचाउन पनि उर्जा खर्च हुन्छ। यसलाई छल्न तपाईंले गुलियो तथा कफीयुक्त खानेकुरा खानुभयो भने एकछिनलाई त ताजापन महसुस हुन्छ तर त्यो धेरैबेर टिक्दैन। त्यसैले आफूलाई हरदम तरोताजा राखिराख्न थोरै तर पौष्टिक खाना खानुपर्छ।
एउटा अध्ययनले के देखाउँछ भने बिहानको नास्तामा उच्च फाइबरयुक्त नास्ता गर्दा इनर्जी लेभल बढ्छ। आइरन तथा स्वस्थकर चिल्लो भएका खाना खानु उपयुक्त हुन्छ। साग, गाजर, एभाकाडो, अण्डा, गेडागुडी, आदिमा पौष्टिक तत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ।
३. एक झप्को निदाउनुहोस्
उठ्नेबित्तिकै वा सुत्नुभन्दा अगाडिको समयमा बाहेक दिउँसो पाँचदेखि २५ मिनेटसम्म एक झप्को निदाउनु शरीरका लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। खासगरी राती सुत्ने समयभन्दा छ–सात घण्टा अगडि एक झप्को सुत्दा शरीरमा उर्जा भरिन्छ। तर लामो समय सुत्ने हो भने त्यसले शरीरमा अझ थकान र अल्छीपन बढाउँछ।
सन् २००८ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार राती धेरै सुत्ने वा दिउँसोको निद्रालाई कफीको सहाराले टार्नुभन्दा एकछिन निदाउनु बढी फाइदाजनक हुन्छ।
अन्य अध्ययनअनुसार एक झप्को निदाउँदा धेरै सुतेर थकाइ मार्दाको भन्दा पनि उर्जा र जोश थपिन्छ। यसले स्मरण शक्ति बढाउने, सिकाइको क्षमता बढाउने र सिर्जनात्मक सोचाइ पनि बढाउने गर्दछ।
४. संगीत सुन्नुहोस्
तपाईंले आफैँ पनि महसुस गर्नु भएको होला, कहिलेकाहीँ थकान वा दिक्क लागेको बेला संगीत सुन्दा छुट्टै किसिमको आनन्द महसुस हुन्छ। वास्तवमा आफूलाई मन पर्ने संगीत सुन्दा दिमागमा डोपामाइन, सोरोटोनिन, अक्सिटोसिन, आदि नामक आनन्द महसुस गराउने रसायनमा कैयौँ गुणा वृद्धि हुन जान्छ।
त्यस्तै अन्य अध्ययनहरुमा उच्च स्वरमा बजेको संगीतले मानिसलाई सतर्क रहन मद्दत गर्दछ, यद्यपि यो असर लामोसमय रहँदैन। संगीतमा जति धेरै विविधता भयो, उति बढी यो प्रभावकारी हुन्छ।
संगीत सुन्नु मात्र भन्दा अझ राम्रो उपाय भनेको आफूले पनि सँगसँगै स्वर मिसाउनु हो। यसले थकान झन् पर पुग्दछ।
५. आकर्षक जीवजन्तुको फोटो अनलाइनमा हेर्नुहोस्
हुन त बिरालो आफैँमा एकदमै अल्छी जनावर हो तर यसले मानिसहरुको मनस्थिति सुधार्न, निद्रा भगाउन र उत्पादकत्व बढाउन सक्छ। जुन २०१५ मा गरिएको एक अध्ययनमा बिरालोका भिडियो हेर्न मन पराउने ७ हजार मानिसमा गरिएको सर्वेक्षणमा यसले उनीहरुको उर्जा बढाएको पाइएको थियो। अध्ययनका सहभागीहरुले बिरालोको फोटो÷भिडियो हेरेर धैरेले आफूमा उर्जा थपिएको अनि नकरात्मक कुराहरु हराएको कुरा बताएका थिए।
यस्तो फोटो र भिडियोले दिमागमा विश्वास र भावुकताको वृद्धि गराउने अक्सिटोसिन नामक रसायनको उत्पन्न गराउँछ। त्यस्तै यसले तनावसँग सम्बन्धित रसायन कोर्टिसलको मात्र घटाउँछ।
६. लामो सास फेर्नुहोस्
यदि तपाईंले निद्राले सताइरहेको छ भने लामो सास लिनुहोस्। यसो गर्दा शरीरका विभिन्न भागमा अक्सिजनको प्रवाह राम्ररी हुन्छ जसले तपाईंको उर्जा घट्न दिँदैन। त्यति मात्र होइन लामो सास फेर्दा तनाव र थकान पनि हट्छ। यसले तपाईंको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई पनि शक्तिशाली बनाउँछ। लामो सास फेर्ने व्यायाम पनि गर्न सकिन्छ।
७. चुइंगम चपाउनुहोस्
चुइंगम चपाउनुलाई नराम्रो बानी भनिहाल्न मिल्दैन। चुइगम चपाउँदा मुख सक्रिय रहने हुँदा दिमाग पनि सक्रिय भइरहन्छ। अध्ययनहरुले चुइगम चपाउँदा दिउँसो निद्रा लाग्ने समस्या हट्ने देखाएका छन्। सम्भवतः मुख चलाइरहँदा दिमाग वरिपरिको क्षेत्रमा हलचल भइरहने हुनाले यस्तो प्रभाव देखिएको हुनसक्छ।
हालैका अध्ययनहरुमा चुइंगम चपाउँदा जाँचमा ध्यान केन्द्रित गर्न, चिन्ता कम गर्न र पढेको कुरा बुझ्नमा पनि मद्दत गर्ने देखिएको छ। तर याद राख्नुस् तपाईंका वरिपरि अरु मानिसहरु छन् भने ठूलोठूलो आवाजमा चुइंगम नपड्काउनुहोस्।
८. नाच्नुस् या एकछिन हिँड्नुस्
यदि तपाईलाई अल्छी लागिरहेको छ भने एकछिन हिँड्नुस्। चाहे भ¥याङमै किन नहोस, एकछिन यताउति गर्दा पनि थकान हट्न सक्छ। आफ्नो मनपर्ने गीतमा एकछिन नाच्दै रमाउनुस्, यसबाट तपाई.ले नसोचेको उर्जा प्राप्त हुन्छ।
९. स्क्रिनबाट आँखा हटाउनुहोस्
धेरैबेरसम्म एउटै स्क्रिनमा हेरिरहँदा यसले आँखा थाक्छ। जसका कारण आँखा खोल्न मुस्किल हुन्छ। ९५ प्रतिशत अमेरिकीहरु कम्युटर भिजन सिन्ड्रोमको जोखिममा छन्। खासगरी कार्यालयमा काम गर्नेहरुलाई यसको खतरा रहन्छ। स्क्रिनमा धेरै हेरिराख्नाले आँखा दुख्नुका साथै आँखा सुख्खा हुने, टाउको दुख्ने तथा गर्धन दुख्ने समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले समयसमयमा आसन परिवर्तन गरिराख्ने, आँखा समयमसमय झिम्क्याउने र बेलाबखत स्क्रिनबाट अन्यत्र हेर्नाले आँखालाई राहत दिन्छ।
तपाईं केहीबेरका लागि उठेर बाहिर निस्किन पनि सक्नुहुन्छ।
हाँसोले शरीरमा उर्जा भर्दछ। कलेजका विद्यार्थीहरुमाझ गरिएको एक अध्ययनअनुसार हास्य शृंखलाहरुको भिडियो १२ मिनेटजति हेरेपछि उनीहरुमा उर्जाको मात्रा बढेको थियो।
त्यसैले हाँस्ने बहानालाई त्यत्तिखै खेर जान नदिनुहोस्।
शनिबार ०६, माघ २०७४ ०२:२४ मा प्रकाशित ।